Shilalekha » ११ उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनमा को कहाँ कति बलियो ? ११ उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनमा को कहाँ कति बलियो ? – Shilalekha
११ उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनमा को कहाँ कति बलियो ?
५ बैशाख २०७९, सोमबार १३:४७
काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धन महानगर र उपमहानगरको भागबण्डा सहमतिनजिक पुगेको छ ।
बालुवाटारमा जारी शीर्ष नेतृत्वसहित गठबन्धनको निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समितिको बैठकमा तालमेलका लागि तयार पारिएको सहमतिको ड्राफ्टमाथि छलफल भइरहेको एक नेताले जानकारी दिए । अहिले देशभरका ६ महानगर र ११ उपमहानगरको भागबण्डाको विषय सत्तारूढ दलहरूभित्र चर्चामा छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको ठूलो व्यापारिक तथा औद्योगिक सहर हो बाँके जिल्लाको नेपालगञ्ज । यहाँको लडाई सो क्षेत्रमा प्रतिष्ठाको लडाइँ हुनेगर्छ । यहाँ २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा पाँच दलकाबीच निकै कडा टक्कर भएको थियो ।
कांग्रेसको परम्परागत शक्ति रहेको यो नगरमा व्यक्तिगत रूपमा भने राप्रपाका उम्मेदवार धवलशमशेर जबरा लोकप्रिय थिए । कांग्रेसभित्रको अन्तर्घात पनि निर्णायक रह्यो । जसले राप्रपाका उम्मेदवार जबरा १२ हजार ५ सय १५ मतसहित निर्वाचित भए ।
लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी राजधानी रहेको रुपन्देही जिल्लाको यो उपमहानगर वर्षैदेखि एमालेको लालकिल्ला हो । त्यसैले यहाँ कांग्रेस र माओवादी केन्द्र तालमेल गरेर २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा गएका थिए । यसरी पनि एमालेका उम्मेदवार शिवराज सुवेदी पराजित भएनन् ।
उनले २३ हजार २ सय ४९ मत प्राप्त गरेका थिए भने कांग्रेसका खेमराज पाण्डेयले २० हजार ८ सय ५१ मत ल्याउँदा जनमुक्ती पार्टीका जनकबहादुर थापामगरले १ हजार १ सय ५२ मत ल्याएर तेस्रो भए ।
अहिले यो उपमहानगरपालिकामा उतिबेला दोस्रो भएको कांग्रेस र एमालेबाट फुटेको बनेको नेकपा एसले दाबी गरिरहेका छन् । तर फुटको असर एमालेले बुटवलमा खासै झेल्नुपरेको छैन । बालकृष्ण खाँण भाइ रामकृष्णलाई तिलोत्तमाको मेयरमा जिताउनका लागि बुटवल माओवादी वा एसलाई छाड्न तयार भए भने अलग कुरा हो, नत्र कांग्रेसकै दाबी रहनेछ ।
लुम्बिनी प्रदेशकै अर्को जिल्ला दाङको सदरमुकाममा रहेको यो उपमहानगरपालिकामा २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेले नै जितेको छ । एमालेका नरुलाल चौधरीले २२ हजार ३० मत ल्याएर निर्वाचित हुँदा कांग्रेसका भुपबहादुर डाँगी क्षेत्रीले १७ हजार ४ सय ८४ मत पाएका थिए । माओवादी केन्द्रका जीवन गौतमले १२ हजार ८२ मत ल्याएर तेस्रो भएका थिए ।
सत्तारूढ गठबन्धनभित्रको भागबण्डामा अहिले यहाँ कांग्रेसले दाबी गरिरहँदा माओवादी केन्द्रले अघिल्लो निर्वाचनमा राम्रो मत पाएकोले आफूलाई जित्न सहज हुने भन्दै यहाँ दाबी गरिरहेको छ । माओवादी नेता जीवन गौतमका लागि यो उपमहानगर सो पार्टीले दाबी गरेर तुलसीपुर कांग्रेसलाई छाड्ने तयारी छ ।
दाङ जिल्लाकै अर्को उपमहानगरपालिका तुलसीपुरमा पनि अघिल्लो निर्वाचनमा एमाले नै जितेको थियो । एमालेका घनश्याम पाण्डे २२ हजार ८ सय ५७ मतसहित विजयी हुँदा कांग्रेसका गेहेन्द्र गिरीले १८ हजार ९ सय ३ मत पाएका थिए । माओवादी केन्द्रका शेषुराम भण्डारी ८ हजार ६ सय ९३ मतसहित तेस्रो भएका थिए ।
अहिले यहाँ अघिल्लो निर्वाचनमा दोस्रो भएको कांग्रेसले जबरजस्त दाबी गरिरहेको छ । यहाँ एमाले विभाजन र गठबन्धनको तालमेलको फाइदा उठाएर कब्जा जमाउने कांग्रेसको रणनीति छ भने नेकपा एसको झिनो दाबी छ ।
२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र यो उपमहानगरमा कांग्रेसका उम्मेदवार नृपबहादुर वड र स्वतन्त्र उम्मेदवार गोपाल हमालको बढी प्रतिस्पर्धा भएको थियो ।
कांग्रेसका वडले १४ हजार ३ सय २४ मतसहित विजयी हुँदा स्वतन्त्र उम्मेदवार हमालले ११ हजार ५ सय २७ मत पाएका थिए । वडलाई पार्टीभित्रै अन्तर्घात भएको थियो । उनकोभन्दा तीनहजार बढी मत उपमेयरमा कांग्रेसकै सुशिला मिश्र भट्टले ल्याएकी थिइन् ।
उनको १७ हजार ४ सय ८ मत थियो । यसरी अन्तर्घात हुँदाहुँदै पनि वडले जितेका थिए ।
यहाँ माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार रामसमझ रानाले १० हजार २ सय ९ मत ल्याउँदा एमालेका दुर्गाप्रसाद जोशीले ९ हजार ९ सय ४६ मत ल्याएर चौथो भएका थिए ।
आरजु देउवाको निर्वाचन क्षेत्र यहाँको नेतृत्व जस्तोसुकै गठबन्धनका लागि भएपनि कांग्रेस छाड्न चाहन्न । त्यसैले उसको यहाँ बलियो दाबी छ ।
यस्तै माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले पनि दाबी गरेका छन् । तर उनीहरूको दाबीलाई बलियो रूपमा हेरिएको छैन ।
प्रदेश नम्बर १ को सुनसरी जिल्लाको इटहरी उपमहानगरपालिकामा २०७४ को निर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार द्वारिकलाल चौधरी २२ हजार ६ सय ७९ मत ल्याएर निर्वाचित भएका थिए । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका रोहितकुमार प्रसाईँले १९ हजार ९ सय ८५ मत ल्याउँदा तेस्रो भएका राप्रपाका रोहितबहादुर कार्कीले ३ हजार ७ सय १५ मत ल्याए भने माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार हरिमाया जिमी चौथो स्थानमा थिइन् ।
यहाँ अहिले कांग्रेससहित माओवादी केन्द्र र नेकपा एसको पनि दाबी छ । कांग्रेस अघिल्लो निर्वाचनको उपविजेता भएकाले उसको स्वभाविक दाबी रहँदा नेकपा एसले भने एमालेले जितेका ठाउँहरू आफूले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा राप्रपाभन्दा पनि पछि परेर चौथो स्थानमा चित्त बुझाएको माओवादी केन्द्रको दाबी भने आश्चर्य पार्ने किसिमको छ ।
सुनसरी जिल्लाकै अर्को उपमहानगरपालिका धरानमा पनि २०७४ को निर्वाचनमा एमालेले नै जितेको थियो । एमालेका तारा सुब्बाले २० हजार ९ सय ७५ मत ल्याएर विजयी हुँदा कांग्रेसका तिलक राईले १६ हजार १ सय २ मत पाएका थिए । तेस्रोमा माओवादी केन्द्रका अइन्द्रविक्रम बेघाले ११ हजार एकसय ८० मत ल्याएका थिए ।
यहाँ निर्वाचित भएका मेयर सुब्बाको मृत्यु भएपछि भएको उपनिर्वाचनमा भने कांग्रेसले ऐतिहासिक जित निकालेको छ । एमालेको ‘लालकिल्ला’का रूपमा परिभाषित गरिएको यो उपमहानगरपालिकामा कांग्रेसले अघिल्ला स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस कहिल्यै जितेको थिएन ।
उपनिर्वाचनका बेला एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर नेकपा बनेको थियो । यही एकीकरणकालमा नै भएको उपनिर्वाचनमा कांग्रेसका तिलक राई फेरि उम्मेदवार भएर निर्वाचित भइदिए । उनले २६ हजार ७ सय ९ मत ल्याउँदा नेकपाका उम्मेदवार प्रकाश राईले २३ हजार ९ सय १४ मत ल्याएका थिए ।ऐतिहासिक जितपछि कांग्रेस यो उपमहानगर फेरि गुमाउन चाहन्न । त्यसैकारण उसको यहाँ जबरजस्त दाबी छ । माओवादी केन्द्रले यहाँ २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा ११ हजारभन्दा बढी मत ल्याएकाले गठबन्धन हुँदा आफूलाई जित्न सहज हुने आनुमान गरेको छ । उसले भागबण्डा गर्दा न्यायपूर्ण हुनुपर्ने भन्दै यहाँ भाग मागिरहेको छ भने नेकपा एसको उही तर्क ‘एमालेले पुरानो जितेको ठाउँ’ भन्दै दाबी गर्दै आएको छ ।
जसपाका नेता अशोक राई धरान उपमहानगरपालिकाकै निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव लड्छन् । त्यसैले यहाँ जसपाले पनि दाबी गरिरहेको छ ।
मधेस प्रदेशको बारा जिल्लाको कलैया उपमहानगरपालिकामा २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसका उम्मेदवार राजेशराय यादवले झिनो मतान्तरले एमाले उम्मेदवार विनोदप्रसाद साहलाई पराजित गरेका थिए । यादवले १० हजार ९ सय ३ मत पाउँदा एमालेका उम्मेदवार साहले १० हजार ७ सय १६ मत पाएका थिए ।
तेस्रोमा संघीय समाजवादी फोरमका उम्मेदवार प्रमोदप्रसाद गुप्ताले ९ हजार ४ सय ४ मत ल्याउँदा चौथोमा माओवादी केन्द्रका मुकेश साहले ४ हजार ३ सय ७१ मत ल्याएका थिए ।
बारा जिल्लाकै यो उपमहानगरपालिकामा अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेका उम्मेदवार कृष्णप्रसाद पौडेल १४ हजार ८ सय ६५ मत ल्याएर विजयी हुँदा कांग्रेसका कृष्णबर्त सिंह ११ हजार ९ सय ९५ मतसहित दोस्रो भएका थिए ।
यहाँ तेस्रो भएको माओवादी केन्द्र धेरैपछाडि थिएन् । उसका उम्मेवार रााजन पौडेलले ११ हजार २ सय ५१ मत पाएका थिए ।
अहिले यहाँ कांग्रेससहित माओवादी केन्द्रको दाबी छ । माओवादी केन्द्रले यो उपमहानगरपालिकालाई बटमलाइन बनाइरहेको छ।
मधेस प्रदेशकै धनुषा जिल्लाको यो उपमहानगरपालिकामा २०७४ को निर्वाचनमा मधेसवादी दलको दबदबा देखिएको थियो । त्यतिबेला तत्कालीन राजपा नेपालका उम्मेदवार लालकिशोर साहले २१ हजार ९ सय ३ मत ल्याएर विजयी हुँदा दोस्रो भएको नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार मनोजकुमार साह कुडीले ११ हजार १ सय ६४ मत मात्रै पाएका थिए ।
तेस्रोमा एमालेका लक्ष्मीनारायण भगतले ४ हजार ८ सय ६५ मत थियो । उपेन्द्र यादवको पार्टी संघीय समाजवादी फोरमका उम्मेदवार ३ हजार ६ सय १२ मतका साथ चौथो स्थानमा थिए ।
हाल मेयर साह जसपामा आवद्ध छन् । संघीय समाजवादी फोरम र राजपाको एकतापछि बनेको जसपामैँ उनी रहँदा पूर्व राजपा समूहले लोसपा गठन गर्दा उनी त्यहाँ गएनन् ।
अहिले यो उपमहानगरपालिकाको गठबन्धनको भागबण्डामा जसपाको स्वभाविक दाबी देखिन्छ भने अघिल्लो पटक दोस्रो भएको कांग्रेसले पनि दाबी गरिरहेको छ ।
बागमती प्रदेशको राजधानी सहर हेटौंडा उपमहानगरपालिका पहिल्यैदेखि एमालेको ‘गढ’ हो । त्यसैले यहाँ २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रकाबीचमा तालमेल भएको थियो । तालमेलले पनि सम्भव भएन ।
मेयरमा एमालेका उम्मेदवार हरिबहादुर महत २३ हजार १ सय २४ मत पाएर बिजयी हुँदा कांग्रेसका आनन्दराम पराजुलीले २२ हजार ५ सय मत पाएका थिए । राप्रपाका मधुकरप्रसाद पराजुलीले ६ हजार ८ सय ५७ मत ल्याएका थिए ।
अहिले यहाँ गठबन्धन दलका कांग्रेस र नेकपा एसको दाबी छ । अघिल्लो निर्वाचनमा नजिकको प्रतिस्पर्धी भएकाले कांग्रेसले दाबी गर्दा एमालेले जितेको ठाउँ र परम्परागत गढमा आफ्नो संगठनतिर तमाम नेताकार्यकर्ता आएकाले नेकपा एसले पनि दाबी गरिरहेको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा पनि यही उपमहानगरपालिकाका भएकाले नेकपा एसले हेटौंडालाई बटमलाइन बनाएको छ । देशभर एउटा पाउँदा नेकपा एसले हेटौंडा नै पाउने देखिन्छ ।